हिमाल खबरपत्रिका | शरीर अर्थात् मन्दिर
शरीर अर्थात् मन्दिर
'म्हःपूजा' मा आफूलाई पुज्नुको अर्थ सांस्कृतिक औपचारिकता मात्र होइन, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना पनि हो।
'पूजा गर्ने हरेकले पहिले आफ्नो शरीरलाई नै मन्दिर मान्नुपर्छ', नेवार समुदायले मनाउने म्हःपूजाको दर्शन यही हो। तर, आफ्नै शरीर पुज्नेहरूले नै आफ्नै शरीरलाई ध्यान दिएका छौं त?
हामी धोएका लुगामा ईस्त्री लगाउँछौं। सवारी साधनमा मोबिल फेर्छौं, हावा जाँच गर्छौं, चाडपर्वमा वाहनको पूजा पनि गर्छौं ताकि दुर्घटना नहोस्। मोटर होस् वा मोबाइल; थोरै मात्र धूलो, दाग लागे पनि चित्त दुख्छ। त्यसलाई नयाँ जस्तै बनाउन हामी लागिहाल्छौं। तर, तिनै मानिस आफ्नो मुटुको बोसोको मात्रा ख्याल गर्दैनन्। तनावग्रस्त मस्तिष्कको मर्मत कसरी गर्ने भनी सोच्दैनन्।
हामीमध्ये अधिकांश आफ्नो शरीरलाई मोबाइल र मोटरसाइकल जति पनि महत्व दिंदैनौं। रोग लागिसकेपछि पैसा खर्च गर्नुपर्दाको आफ्नो र अरूको अनुभवबाट पनि हामी सिकिरहेका छैनौं। सुगन्ध र गहनाले बाहिरबाट आकर्षक शरीरका पार्टपुर्जा कस्ता छन्? हाडजोर्नीमा 'मोबिल' छ कि छैन? फोक्सोमा प्राण अर्थात् वायु पुगेको छ कि छैन? घर, जग्गा, पैसा छ भनेर सुरक्षित महसूस गर्ने हामी शरीरबारे भने वास्ता गर्दैनौं।
मान्छेको यो स्वभाव विचित्रको छ। सर्वसाधारण मात्र होइन, शिक्षित शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीले समेत शरीरबारे ध्यान नदिएका कैयन् उदाहरण छन्। 'तिमी मेरो मोटोपनलाई नहेर। म जे भन्छु त्यो गर। मैले जे गर्छु, त्यो होइन', कतिपय मुटु रोग विशेषज्ञले यसो भन्ने गरेको पनि सुनिएको छ।
टेबुलमा बसेर काम गर्नेहरूमा ढाड दुख्ने समस्या आम बनेको छ। बुद्धिको काम गर्नेहरू बलको काम गर्नेभन्दा अस्वस्थ किन छन्? समस्याको चुरो नै यही हो। जबसम्म शरीरले 'ऐ174या' भन्दैन, हामी शरीरलाई बोझ्ा थपिरहेकै हुन्छौं। तिहारमा अनेक थरीका मिठाईको खपत हुन्छ। तर, हामी ती मिठाईमा प्रयोग गरिएको तेल, रंगमा विचार पुर्‍याउँदैनौं। मिठाईले पेटभित्र कति बिगार गर्छ भनी सोच्दै सोच्दैनौं। मोबाइल किन्दा उच्चस्तरको खोज्ने अनि पर्वका खानेकुरा चाहिं जस्तो भए पनि हुने?
औषधिको क्रममा हुने आर्थिक क्षति त छँदैछ, आफूलाई पर्ने दुःख र परिवारका सदस्यलाई हुने तनावलाई पैसामा तुलना गर्न सकिन्न। एकछिनको जिब्रोको स्वाद रोक्न नसक्दा पछिसम्म शरीरमा पर्ने समस्या हेर्दा पर्वमा मासुको मोह कम गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ।
शरीर प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो। तर, व्यवहार भने हामी जीवनप्रति माया नै नभएजस्तो गर्छौ। शरीरप्रतिको प्रेम नै पूजा हो। तर, यो संस्कारमा मात्र होइन, व्यवहारका रूपमा लागू गर्न सके म्हःपूजाको गरिमा बढ्नेथियो।